Hery - Tsiky dia ampy | Aogositra 2006 |
Mandroso Google... zah kou.
2006-08-24 @ 10:06 in Serasera.org
Efa elaela aho tsy nijery ireo services natolotr'i Google noho ilay izy tsy actifs daholo. Rehefa misoratra anarana dia lazainy hoe hilazana ianao rehefa vonona ny tolotra. Anisan'izany ohatra ny Google hosted sy ny Google analytics.
Video Fihaonana Roma
2006-08-23 @ 17:03 in Serasera.org
Tonga soa amantsara ny video avy tany amin'i Ralay (izay isaorana be dia be) mitantara ny fihaonana teto Roma. Sombiny ihany no hapetraka eto.
Namana serasera eto Roma
2006-08-03 @ 14:14 in Serasera.org
Dia tonga araka ny fandaharam-potoana ny namana vitsivitsy avy ao amin'ny serasera.org. Mbola hitohy ny programa fa dia resaka fifankahafantarana sy fitsenana aloha no nafotaka. Mbola hisy ihany koa ny ho tonga rahampitso fa dia mahafinaritra aloha e.